Ezinụlọ Na-enwe Obi Ụtọ​—⁠Na-eme Ihe Ị Na-akụziri Ụmụ Gị
Olee ụdị nzọụkwụ ị na-emere ụmụ gị ka ha na-agbaso?
Ndị nne na nna kwesịrị ịna-eme ihe ha na-akụziri ụmụ ha ka ha na-eme. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na mmadụ abịa n’ụlọ unu, gị asị nwa gị gwa onye ahụ na ị nọghị ya, i kwesịghị ịtụ anya na nwa ahụ ga na-ekwu eziokwu.
Otu nwoke aha ya bụ David kwuru, sị: “Ndị mmadụ na-ekwukarị, sị, ‘Soro okwu ọnụ m, esola omume m.’ Ma, ejikwala aka ahụ azụ ụmụaka. Otú ahụ fom e tinyere ná mmiri si amịkọrọ mmiri, ụmụaka na-eme ihe ọ bụla anyị kwuru ma ọ bụ mee. Ha ga-agwadị anyị na ihe anyị na-akụziri ha abụghịzi ihe anyị na-eme.”
IHE BAỊBỤL KWURU: “Gị onye na-ekwusa ‘Ezula ohi,’ ị̀ na-ezu ohi?”—Ndị Rom 2:21.
Ụmụaka na ndị na-eto eto na-emekarị ihe ha hụrụ ndị mụrụ ha na-eme karịa ihe ha hụrụ ma ndị ọgbọ ha ma ndị ọzọ na-eme. Ọ pụtara na ọ bụ gị kwesịrị ịkụziri nwa gị ụzọ ọ ga-eso, ọ bụrụhaala na ị na-eme ihe ị na-akụziri ya.
Otu nwaanyị aha ya bụ Nicole kwuru, sị: “Anyị nwere ike ịgwa nwa anyị ihe ọ ga-eme ugboro ugboro, na-eche na ọ naghị ege ntị, ma, naanị otu ugboro anyị na-emeghị ihe anyị kwuru, nwa ahụ ga-agwa anyị na anyị emeghị ihe anyị kwuru. Ụmụaka na-ahụ ihe niile anyị na-eme, ma mgbe anyị chere na ha anaghị ahụ anyị.”
IHE BAỊBỤL KWURU: ‘Amamihe nke si n’elu adịghị ihu abụọ.’—Jems 3:17.
Chebara ihe ndị ị na-eme echiche. Olee ụdị ihe ị na-ele ma ị chọọ ịtụrụ ndụ? Olee otú ị na-esi emeso di gị ma ọ bụ nwunye gị, nakwa ụmụ gị ihe? Olee ụdị ndị bụ enyi gị? Ị̀ na-echebara ndị ọzọ echiche? Ihe a na-ekwu bụ ma ị̀ bụ ụdị mmadụ ị chọrọ ka ụmụ gị bụrụ?
Otu nwaanyị aha ya bụ Christine kwuru, sị: “Mụ na di m anaghị agwa ụmụ anyị ka ha mee ihe anyịnwa na-anaghị eme.”
Rịọ mgbaghara maka ihe i mejọrọ. Ụmụ gị ma na i zughị okè. Ọ bụrụ na i mejọọ di gị ma ọ bụ nwunye gị ma ọ bụkwanụ ụmụ gị, sị ha: “Biko, gbaghara m.” Ụmụ gị ga-amụta ịna-ekweta ihe ha mejọrọ, na-adịkwa umeala n’obi.
Otu nwaanyị aha ya bụ Robin kwuru, sị: “Ụmụ anyị kwesịrị ịnụ ka anyị na-ekweta ma na-arịọ mgbaghara maka ihe anyị mejọrọ. Ọ bụrụ na anyị anaghị eme ya, hanwa agaghịkwa na-eme ya.”
Otu nwaanyị aha ya bụ Wendell kwuru, sị: “Ụmụ anyị na-emekarị ihe ha hụrụ anyị na-eme. Àgwà anyị bụ ihe kacha mma anyị ga-eji akụziri ụmụ anyị ihe n’ihi na ha na-ahụ ihe anyị na-eme mgbe niile. Àgwà anyị dị ka akwụkwọ ụmụ anyị si na ya na-amụta ihe mgbe ọ bụla.”